အိမ်မှာမီးဖွားဖို့ စဉ်းစားရမယ့်အချက်များ - Hello Sayarwon
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။ 09/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အိမ်မှာမီးဖွားဖို့ သင့်မသင့်ဆိုတာ စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်ရော ကလေးပါ အန္တရာယ်ရှိနိုင်လား၊ သားဖွားဆရာမ ဒါမှမဟုတ် သားဖွားအကူလိုသလား၊ အခြေအနေဆိုးလာရင် နောက်တစ်မျိုးအတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်း ရှိသလား စတာတွေ စဉ်းစားရပါမယ်။
ဒီဆောင်းပါးကတော့ အိမ်တွင်းမီးဖွားခြင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
– ကိုယ်ဝန်ဆောင်၏ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး နောက်ဆက်တွဲပြသနာ သိပ်မရှိခြင်း။
– ခွဲစိတ်မှုမပြုဘဲ မွေးဖွားနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ခြင်း။
– မွေးဖွားချိန်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြစ်လိုခြင်း။
– မိမိနဲ့ အကျွမ်းဝင်တဲ့ မစိမ်းတဲ့ ဝန်းကျင်မှာ မွေးဖွားလိုခြင်း။
– ယဉ်ကျေးမှုအရ (သို့) ဘာသာရေးအရ စံသတ်မှတ်မှုများ ရှိနေခြင်း။
– အိမ်မှာပင် ချက်ချင်းကလေးနို့တိုက်နိုင်ခြင်း၊ ကလေးနှင့် အတူနေနိုင်ခြင်း
မိခင်နို့စောစောတိုက်ခြင်းဟာ သားအိမ်ကနေ သွေးလွန်တာကို ကာကွယ်ပေးသလို ကလေးရဲ့ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်က အချွဲတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအားကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
– ငွေကြေးကုန်ကျမှု သက်သာခြင်း။
– ဆီးချို၊ သွေးတိုးနှင့် နာတာရှည် ကျန်းမာရေးပြသနာများ ရှိခြင်း။
– ယခင်က ခွဲစိတ်မွေးဖွားဖူးခြင်း၊ လမစေ့ဘဲ မွေးဖွားနိုင်ခြေရှိခြင်း
– ကိုယ်ဝန်၏ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများ ရှိနိုင်ခြင်း (ဥပမာ- ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သွေးတိုးခြင်း)
– ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၃၇ပတ်ထက် နည်းခြင်း၊ ၄၁ပတ်ထက်များခြင်း
ဘယ်အချိန်မှာ ဆေးရုံကိုလွှဲပြောင်းဖို့ လိုသလဲ
အောက်ပါအခြေအနေတွေမှာဆိုရင် ဆေးရုံမှာ စောင့်ကြည့်ကုသသင့်ပါတယ်။
– မီးဖွားခြင်းအဆင့်များ တိုးတက်မှုမရှိခြင်း
– ရေမြွာများထဲတွင် အညစ်အကြေးများ ပါလာခြင်း
– ကလေးတွေးမည့်လမ်းကြောင်းတွင် ချက်ကြိုးက ခံနေခြင်း
– မီးဖွားခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ သွေးဆင်းခြင်း
– ကလေးတွင် ချို့ယွင်းမှုတခုခုရှိခြင်း (ဥပမာ ပုံမှန်မဟုတ်သော နှလုံးခုန်နှုန်းရှိခြင်း)
– ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူနာပြု (သို့) သားဖွားဆရာမကို ရှာဖွေပါ။ (လက်သည်မဟုတ်ပါ။)
-ကလေးမီးဖွားလို့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။
– မွေးဖွားမည့် အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ပါ။
– ဆေးရုံသွားနိုင်ဖို့လည်း ပြင်ဆင်ထားပါ။
– မွေးဖွားပြီးချိန်အတွက်လည်း အကူအညီများ ကြိုတင်ရှာဖွေထားပါ။
အိမ်မှာမီးဖွားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အများစုဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလတစ်လျှောက် စောင့်ကြည့် ဂရုပြုခဲ့တာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲပြသနာနည်းသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်မှာ အစီစဉ်တကျ မီးဖွားသူတွေမှာတောင် ကလေးသေဆုံးနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ သေချာစွာ ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်မှာမီးဖွားခြင်းဟာ အဆင်ပြေနိုင်ပြီး အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ထင်မထားတဲ့ ပြသနာတွေ ရောက်လာတတ်တယ် ဆိုတာ သတိပြုပါ။ အဲဒီလိုကြုံရင် ဆေးရုံကို လွှဲပြောင်းဖို့ နှောင့်နှေးမနေသင့်ပါဘူး။ အိမ်မှာပဲမီးဖွားခြင်းရဲ့ အကျိုးနဲ့အပြစ်တွေကို သိရှိနားလည်ထားရင် မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
American Pregnancy Association. Home Birth: Benefits and Tips. http://americanpregnancy.org/labor-and-birth/home-birth/. Accessed: November 27 2016
Mayo Clinic. Home birth: Know the pros and cons. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/home-birth/art-20046878?pg=1. Accessed: November 27 2016